Maka: isikhangeli semfazwe | Martech Zone
Maka: isikhangeli semfazwe
Ukujonga isabelo sentengiso sangoku kubakhangeli kunika ukuqonda ukuba ngubani ophumeleleyo nophulukana neemfazwe. IFirefox iyaqhubeka nokwakha umfutho, iSafari inyukela phezulu, kwaye i-Intanethi Explorer ilahleka emhlabeni. Ndingathanda ukunika izimvo kwezi zintathu 'ngeethiyori zam' zento eyenzekayo. I-Internet Explorer Emva kokutshabalalisa iNetscape Navigator, IE ngokwenene yaba ngumgangatho wegolide kumnatha. Isikhangeli sasilula, sisebenza, kwaye sasilayishwe ngaphambili ngazo zonke iiMveliso zikaMicrosoft.